Sapana (2011) review
Nepali Movies - News, reviews and discussion »
Topic: Sapana (2011) review
Author Topic: Sapana (2011) review (Read 2698 times)
« on: June 19, 2015, 12:26:16 AM »
Watch the movie here -->
फिल्म समीक्षा सपना
सपना आफु खलपात्रबाट असुरक्षित हु“दा हेलिकप्टरबाट सपनाको राजकुमार आएर उद्धार गरी लगेको सपना बारम्बार देख्ने गर्छे । सपनामा देखेको दृश्यले एक दिन विपनामा पनि मेल खाएपछि सपनाको सपना साकार हुन्छ ।
प्रदीप श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म ‘सपना’मा मुख्य पात्र सपना (नन्दिता केसी)ले कल्पेको राजकुमारकै शैलीमा वास्तविकतामा हेलिकप्टर क्याप्टेन दिपक (अर्जुन कार्की) आएपछि दुई दिन भित्रै प्रेम बस्छ र त्यो विवाहमा परिणत हुन्छ । जबकी सपनालाई लामो समयदेखि मन पराउ“दै आएको र पाईला पाईलामा सहयोग गरेको राज (आर्यन सिग्देल) भने खाली हात बन्छ । राजलाई सरसल्लाह दिईरहने कृष्ण (राजेश हमाल) माया गरेर मात्र हु“दैन अभिव्यक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्छ । किनकी उसले पनि समयमै आफुले मन पराएकी राधालाई त्यसबारे जानकारी दिन अन्कनाएकैले प्रेम वियोग खेप्नु परेको हुन्छ ।
मल्टिस्टारर फिल्म भएपनि शीर्षक अनुरुपै फिल्मको कथा नायिका सपनामा घुमेको छ । सपनाले दिपकस“ग विवाह गरेको १० दिनमै विधवा बन्छे । आफुले मन पराउने सपनाले पति गुमाएको थाहा पाएपछि राजले उनलाई अपनाउन राजी हुन्छ । यसैबीचमा सपनाले पनि आफुलाई राजले पहिले देखि नै चाहेको थाहा पाएपछि नया“ सम्बन्ध गा“स्न तयार हुन्छे । जग्गेमा बसिसकेका राज र सपना त्यसबेला छक्क पर्छन्, जब हेलिक्पटर दूर्घटनामा परेका दिपक सकुशल टुप्लुकिन्छन् । त्यसपछि सपनाले यथार्थको राजकुमारलाई छोडेर सपनाकै राजकुमारलाई अगाल्न पुग्छे ।
बसन्तकुमार श्रेष्ठ र हरि बरालको संयुक्त लगानी रहेको ‘सपना’ फिल्मको कथा पृथक लाग्दैन । पटकथाले फिल्ममा देखिने केही घटनाहरुको स्वतन्त्र पुष्टि गर्ने झन्झट उठाएको छैन । सपनामै देखिए जसरी दिपक कुन सन्दर्भमा आए ? उद्दार गरी कहा“, कीन लगे ? अनि दुई दिनमै विवाहकै अवस्थामा कसरी पुगे ? प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यसो त असंभव प्रायः लाग्ने दूर्घटनाबाट उनी कसरी उम्के भन्नेमा पनि दर्शक अनभिज्ञ हुन्छन् ।
फिल्मको सकारात्मक पक्ष यसको संगीत हो । महेश खड्काको संगीतमा मिठास छ । गीतहरु कर्णप्रीय बनेका छन् । बसन्त श्रेष्ठको नृत्य निर्देशक मध्यम छ । तर दिपक वान्तवाको छायांकनले भने धेरै ठाउ“मा हावा खाएको छ । सामान्य फोकस ईन÷आउटमै उनी चिप्लिएका छन् । अभिनयमा आर्यन सिग्देल र सुनील दत्त (खलपात्र बनेका) सफल देखिएका छन् । बरु प्रमुख भुमिका पाएर पनि नन्दिताले न्याय दिन सकेकी छैनन् । उनको अनुहारमा भावभंगीको स्पष्ट कमी झल्कन्छ । कतिपय रोमान्टिक मुडमा उनी फिका लाग्छिन् ।
निर्देशक ः प्रदीप श्रेष्ठ
कलाकार ः राजेश हमाल, आर्यन सिग्देल, नन्दिता केसी, अर्जुन कार्की, सुनिल दत्त आदि ।
original sapana --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-sapana/
Page created in 0.07 seconds with 15 queries.